गोप्य अंग ताक्दै ट्याटु, अफ-एयरमा सेक्सी ट्याटु खोपाउने, ब्रेकपछि छोप्ने ! - Naya Pusta
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७४ माघ २७, शनिबार ०६:४७
किन छोप्न लागेको ? रिपोर्टिङका क्रममा रहेको संवाददाताले जिज्ञासा राख्यो । उनले हाँसीहाँसी जवाफ फर्काइन्, ‘यहाँ ब्वाइफ्रेन्डको नाम छ । ऊसँग ब्रेकअप भयो, उसले अर्कै केटीसँग बिहे ग-यो । त्यसैले छोप्न लाको ।’
यतिबेला सहर–बजारमा मान्छेका हात, पाखुरा, घाँटी लगायतका अंगमा खोपिएको ट्याटु त धेरै देखिन्छन् तर सँगसँगै शरीरका कम्मर, नितम्ब, पिठ्यु, छाती, तिघ्रा, पेट आदि ठाउँमा ट्याटु खोपाउने पुस्ता पनि उत्तिकै भेटिन्छन् । ‘अहिले ट्याटु खोपाउने मामिलामा महिला–पुरुषको संख्या बराबर छ, अझ गोटाका हिसाबले स–साना भए पनि केटीले बढी खोप्दा हुन्,’ ठमेलको व्यस्त ट्याटु हाउस मोहन्स ट्याटुका ट्याटुकार श्री किसी भन्छन्, ‘ट्याटु भनेको छाला जहाँ–जहाँ हुन्छ त्यहाँ खोप्न मिल्छ । कसैले देखिने ठाउँमा खोप्छन्, कसैले नदेखिने । त्यो मान्छेको रुचिमा भर पर्छ । खासगरी युवतीहरुले गोप्य ठाउँमा खोपाउने गर्छन् ।’ विदेशमा १८ वर्È पुगेपछि मात्रै ट्याटु खोपाउन पाइन्छ तर नेपालमा भने १६ वर्षमाथिका लागि खोपाउने गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै पाका उमेरका विदेशीहरु नेपाल आएको सम्झ्नालाई चिरस्थायी बनाउन प्राकृतिक दृश्यस“गै बुद्ध, शिव, सरस्वती आदिको आकृति बनाउन रुचाउँछन् । जसलाई ‘ओरिएन्टल ट्याटु’ भनिन्छ।
अफेयरमा खोपाउने, ब्रेकपछि छोप्ने
पोखरामा पनि त्यस्तै समस्या रहेको ट्याटुकार विक्रमकुमारले बताए । ‘बिहेअघि नाम खोपाउन आउनेलाई त म नखोप्न नै सुझाव दिन्छु,’ उनले भने । मनोविद् करुणा कुवँर भन्छिन्, ‘प्रेममा असुरक्षा महसुस भएपछि भित्रैबाट आत्मविश्वासको विकास गर्न युवायुवतीले एकअर्काका नाममा ट्याटु खोपाउने गर्छन् । कोही केटीलाई केटा एकदमै मनपरेको छ तर उसले छाडेर जाला कि भन्ने डर मनमा छ भने उसले प्रेममा आत्मविश्वास बढाउन र आफ्नो प्रेमीलाई तिम्रालागि केसम्म गर्न सक्छु भनेर प्रमाणित गर्न उसको नामको ट्याटु खोपाउने गर्छन् ।’
शरीरका गोप्य भागतिर ट्याटु खोपाउँदा सबैभन्दा बढी दुख्ने गरेको ट्याटुकारहरु बताउँछन् । ‘प्रायः सबै गोप्य ठाउँतिर बढी दुख्ने गर्छ किनभने त्यहाँको छाला कमजोर हुन्छ । खासगरी छाती र स्तनमा धेरै दुख्ने गर्छ,’ आठ वर्षदेखि ट्याटु कलामा कार्यरत मोहन्स ट्याटुका श्री किसीले बताए।
यो पनि पढ्नुहोस् : गाइजात्रामा नेतादेखि कर्मचारीमाथि झटारो
शरीरका गोप्य र संवेदनशीलमा भागमा ट्याटु खोप्दा ट्याटुकारहरुलाई कस्तो अनुभूति हुँदो हो ? ‘सुरुसुरुमा नेचुरल फिलिङ आउँथ्यो,’ पोखराका ट्याटुकार विक्रमकुमारले भने, ‘तर काम गर्न थालेपछि ध्यान काममै मात्र हुन्छ । नेगेटिभ्ली सोचिँदैन । फेरि कसैको इच्छाविपरीत जाने कुरा पनि हुँदैन ।’ काठमाडौं, वसन्तपुरका केटिएम इन ट्याटुका ट्याटुकार निरज शाहीको विचार पनि विक्रमसँग मिल्दोजुल्दो नै थियो । ‘सुरुसुरुमा नर्भस भइन्छ,’ उनले भने, ‘तर मेसिन चल्न थालेपछि पूरै काममा फोकस भइन्छ । अरु केही मतलब हुन्न ।’
गोप्य खोपाउने मात्रै होइन गोप्य छेड्ने चलन पनि बढ्दो छ । ट्याटु हाउसहरुमा ट्याटुसँगै पियर्सिङ (औँठी छेड्ने) सुविधा पनि राखिएको हुन्छ । मोहन्स ट्याटुका पियरसियर अर्थात् म्यानेजर ओमप्रकाश गुरुङका अनुसार अचेल शरीरका जुनसुकै अंगमा ट्याटु हान्नु र पियर्सिङ गर्नु सामान्यजस्तै भइसक्यो । ‘अचेल अप्ठेरो मान्ने भन्ने नै हुन्न, फेरि पर्सनल ट्याटु र पियर्सिङका विषयमा कुरा गर्नै नचाहने धेरै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘युवतीहरुले गोप्य भागको कुरा गर्नुपर्दा निप्पल, नाइटो र यौनाङ्ग (क्लिट)मा छेड्ने गर्छन् । सायद पियर्सिङले उनीहरुलाई आनन्दित तुल्याउँदो हो ।’ पछिल्लो समय लिंगमा ‘सिलिकन बिट्स’ लगाएर यौनिक आनन्द लिने पुरुष पनि बढेको गुरुङको भनाइ थियो।
ट्याटुले कुनै पनि चित्र, नाम अर्थात् भनाइलाई ‘सिम्बोलिकल्ली रिप्रिजेन्ट’ गरिरहेको हुन्छ । जस्तो कसैले आफूलाई फूलजस्तो महसुस गर्छ भने फूलको ट्याटु खोपिरहेको हुन्छ, कसैले इगल महसुस गर्छ भन्ने इगलकै खोप्छ। कतिपयलाई आफ्नो पहिचान बाहिर देखाउने चाह हुन्छ र उसले देखिने ठाउँमै पहिचान चित्रित हुनेगरी ट्याटु खोप्छ । कतिपयले फेसनकै रुपमा पनि ट्याटु खोपिरहेका हुन्छन् । सबैले खोपिरहेका छन्, मैले खोपिन भने पछाडि पर्छु भन्ने ठानेर खोपाउँछन्।
शरीरका प्राइभेट पार्टमा ट्याटु खोपाउनेहरुको ध्येय पनि आफ्नो पहिचानलाई चित्रित गर्ने नै हो । कतिपयले स्तनमा ट्याटु खोप्छन् र आधा ट्याटु देखिने गरी ‘ओपन ड्रेस’ लगाउँछन् । गोप्य भागमा ट्याटु खोपेर देखाउन खोज्नेहरुको केस यौनिकतासँग जोडिएको हुनसक्छ । ‘मेरो यौनिकता यसरी रिजेम्बल’ गर्छु भन्ने भावना उसमा हुन सक्छ । कतिपयले सुन्दर फूलको ट्याटु स्तनमा खोपेर आफ्नो यौनिकता चित्रित गर्न खोजिरहेका हुन्छन् । यसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्ने हो भने आफूतिर मान्छेको ध्यान खिच्न उनीहरु यसरी ट्याटुु खोपाइरहेका हुन्छन्।
कतिपयले सिंगो शरीरभर ट्याटु खोपेको पनि देखेकी छु । मैले गरेको अध्ययनमा कतिपयलाई ट्याटुको लत भइसकेको हुँदोरहेछ । सियोले घोपिरहँदाको आवाजले उनीहरुलाई आनन्द महसुस गराउँदो रहेछ । खोपाइको एडिक्सन, आवाजको एडिक्सनमा परेपछि उनीहरु पटकपटक खोपाउने रहेछन्।
मान्छे कुन अवस्था र परिस्थितिमा गुज्रिरहेको हुन्छ, उसले आफ्नो ट्याटुमार्फत त्यसैलाई चित्रित गर्न खोजिरहेको हुन्छ । आफ्नो माइन्ड जेमा आबद्ध छ, उसले ट्याटुमार्फत त्यसैलाई पोट्रे गरिरहेको हुन्छ । जस्तो उसले गाँजा, ड्रग्स खाइरा’छ भने त्यही खालको सिम्बोल खोपाउँछ । मैले २–४ जना केटालाई सोध्दा उनीहरु गाँजा खाने भएकाले शिवजीको ट्याटु बनाएको बताएका थिए।
यो पनि पढ्नुहोस् : २३३ जना बोकेको विमानमा चरा ठोकियो ... पछि सबै चकित
ट्याटु डिजाइन पनि मान्छेको स्टेट अफ माइन्डमा निर्भर हुन्छ । समय÷परिस्थितिअनुसार मान्छेले छनोट गर्ने सिम्बोल परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । समय, उमेर अनुसार मान्छेको मेन्टल स्टेट फरक हुँदै गइरहेको हुन्छ । त्यो समयमा ठीक लागेको सिम्बोल अहिले नलाग्न सक्छ अनि हटाउन अर्थात् कभरअप गर्ने गरिन्छ।
मैले १८ वर्षकी एक जना युवती भेटेकी थिएँ, जसले एकजना व्यक्तिको नाम ठूलो अक्षरमा नाडीमा खापेकी थिइन् । कारण सोध्दा जीवनमा ठूलो सहयोग पु-याएको र मिल्ने भए शरीरभर फैलने गरी उसको नाम खोप्न मन भएको बताएकी थिइन् ।
मेघना मगर/ट्याटु प्रेमी
मैले शरीरको तीन ठाउँ ट्याटु खोपेको छु । कुम, हिप र खुट्टामा । अब छातीमुनि खोप्न मन छ । ट्याटु म सधैँ देखाउँदिन । कहिलेकाहीँ देखियो भने मात्र भ्यालु हुन्छ भन्ने लाग्छ । त्यो पनि हल्का देखियोस् अनि मान्छेलाई कौतहुलता होस् भन्ने लाग्छ । यो केटीको ट्याटु रहेछ, यस्तोमा के रहेछ भनेर कौतहुल होस् भन्ने लाग्छ । मैले हिपमा पाठेघरको ट्याटु बनाएको छु । पाठेघरमार्फत बच्चा जन्मिन्छ र यसको ठूलो अर्थ हुन्छ भनेर त्यसको ट्याटु बनाएको हुँ । त्यस्तै कुममा जापानी रोज र खुट्टामा मैले आफ्नै डान्स सेन्टरको लोगो खोपाएकी छु । मैले ट्याटु खोप्नुको उद्देश्य मान्छेको ध्यान आफूतिर तान्नलाई नै हो।
छोरीको बिहे छिनेर हिँडेका थिए सिंचाइ सचिव, काठमाडौँ नपुग्दै भयो जिप दुर्घटना
आफुसँगै बस्दै आएका जोगीको हत्या गरी फरार भएका अर्का जोगी पक्राउ